ထိုင်း – Myanmar Live
June 16, 2020 June 16, 2020 - by peeraporn y.
ထိုင်းနိုင်ငံချွန်ဘူရီခရိုင်တွင် ဆိုင်ကယ်သူခိုးတစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ အကြောင်းကြားလာတာကြောင့် သွားရောက်စစ်ဆေးရာတွင် သူခိုးမဟုတ်ဘဲ သူခိုးမှ လှည့်စားခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ ကိုအောင်သိန်းဌေး အသက် …
May 29, 2020 May 29, 2020 - by peeraporn y.
တစ်နိုင်ငံတည်းသား မာဖီးယားတစ်ဦးက အသက် ၁၂ ရှိမိန်းကလေးကိုခိုးယူပြီး ၅ ရက်ကြာ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ပြီး နောက် ရထားဘူတာတစ်ခုတွင်စွန့်ပစ်ထားခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ …
May 26, 2020 May 26, 2020 - by peeraporn y.
မဲ့ဆောက်၊ ရနောင်း၊ မဲ့ဆိုင်၊ စတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်များမှ အမိမြေသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာနိုင်ဖို့အတွက် မြန်မာသံရုံးသို့ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သားများ ၂၇,၀၀၀ …
May 19, 2020 May 19, 2020 - by peeraporn y.
ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့ ဒုတိယအကြိမ် လော့ခ်ဒေါင်းဖြေလျော့လိုက်ပြီဖြစ်တာကြောင့် ဈေးဝယ်စင်တာတွေလည်းပြန်လည် ဖွင့်လှစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပြန့်နှံ့နေဆဲကာလဖြစ်တာကြောင့် ဈေးဝယ်စင်တာထဲဝင်တော့မယ်ဆိုရင် ရောဂါကူးစက်မှု …
၅ လအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံတွင် သွေးလွန်တုတ်ကွေးလူနာ ၁ သောင်းကျော်တိုး
May 13, 2020 May 13, 2020 - by peeraporn y.
လက်တစ်လောထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးကူးစက်သူဦးရေထက် သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါခံစားနေရတဲ့လူနာ ဦးရေပိုမိုများပြားနေကြောင်းသိရပါတယ်။၂၀၂၀ မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှအချက်အလက်အရထိုင်းနိုင်ငံဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးကူးစက်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်နေဆဲဆိုပေမယ့် …
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်နှုန်းအရင်ကထက်ရာချီခုန်မတက်ဘဲ လျော့ကျလာသဖွယ်ရှိနေသော် လည်း မနေ့ကတစ်နေ့ထဲမှာ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း စုန်ခလာခရိုင် လ၀က ရဲအချုပ်ခန်းအတွင်း …
ထိုင်းဇနီးသည်နှင့်လမ်းခွဲခဲ့ရတာမယားပါသမီးမြှောက်ပင့်မှုကြောင့် ဆိုသည့်အခဲနှင့်အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ကလေးကိုသတ်ဖြတ်
April 7, 2020 April 7, 2020 - by peeraporn y.
၂၀၂၀ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံချွန်ဘူရီခရိုင် စီရာချာမြို့နယ် နောင်ခမ်ရဲစခန်းမှ အာလူးစိုက်ခင်းတစ်ခုတွင် ကလေးအလောင်းတစ်လောင်းတွေ့ကြောင်း အကြောင်းကြားလာသဖြင့် …